एक बर्ष पछि मेरो कार्यकालमा यति योजना सम्पन्न गरें भनेर गर्भका साथ सबैका सामु उभिने गरि काम गर्ने सोच बनाएको छु : मोहन ढकाल अध्यक्ष रोटरी क्लब अफ दमक – सप्तरंगी एफ एम
Home / अन्तर्वार्ता / एक बर्ष पछि मेरो कार्यकालमा यति योजना सम्पन्न गरें भनेर गर्भका साथ सबैका सामु उभिने गरि काम गर्ने सोच बनाएको छु : मोहन ढकाल अध्यक्ष रोटरी क्लब अफ दमक
एक बर्ष पछि मेरो कार्यकालमा यति योजना सम्पन्न गरें भनेर गर्भका साथ सबैका सामु उभिने गरि काम गर्ने सोच बनाएको छु : मोहन ढकाल अध्यक्ष रोटरी क्लब अफ दमक
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २५/
(रोटरी क्लब अफ दमकको स्थापना भएको ७ बर्ष भएको छ । यो सात बर्षको अवधिमा रोटरी क्लब दमकले ७ जना नेतृत्व पाएको छ । क्लबको भर्खरै सम्पन्न अधिवेसनबाट दमकमा २३ बर्ष देखी होटल व्यवसाय गर्दै आउनु भएका मोहन ढकाल अध्यक्ष चुनिनु भएको छ । वहाँ संग गरिएको कुराकानी ।)
रोटरी क्लब दमकको नेतृत्व सम्हान्नु भएको छ । कस्तो अनुभुती भैरहेको छ ।
मैले यो मेरो जिवनकै हाल सम्मको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धिको रुपमा लिएको छु । म एक दमै उत्साहीत छु की रोटरी क्लब जस्तो विश्वमै स्थापित संस्थाको दमकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । गर्भ महसुस भैरहेको छ ।
तपाईंका योजनाहरु के के रहेका छन् ।
मैले मेरा योजनाहरु यि यि छन् भनेर अहिलेनै प्रचार गरेर तालि खानु भन्दा पनि एक बर्ष पछि मेरो कार्यकालमा यति योजना सम्पन्न गरें भनेर गर्भका साथ सबैका सामु उभिने गरि काम गर्ने सोच बनाएको छु । कतिपय कस्तो हुन्छ भने धेरै योजनाहरु सम्पन्न गर्न को लागी कुनै एक व्यक्तिको ईच्छा शक्तिले मात्रै हुने भन्दा पनि सामाजिक परिवेस, वातवारण, समय लगायत सबै क्षेत्रको सम्योजन मिल्न पर्छ त्यसैले अहिले मेरा योजना ई छन् भनौंला पछि बिबिध कारणले पुरा भएनन् भने ढाँटे जस्तो हुन्छ । त्यसैले अहिलेनै योजनाको प्रचार गर्नु भन्दा पनि मेरो यो एक बर्षको कार्यकालमा रोटरि क्लबको सिद्धान्त र उद्देस्य अनुसार समाजको लागी उल्लेख्य काम गर्ने सोच बनाएको छु । कार्यकाल सकिए पछि आगामी बर्ष यसैगरी तपाईंको यस सप्तरङ्गी एफ.एम.को स्टुडियोमै बसेर गर्भका साथ मैले यी यी काम सम्पन्न गरें भनेर सबैलाई सुनाउन चाहन्छु ।
रोटरीले दमकमा स्थापना भएको यो ७ बर्षको अवधिमा त्यस्तो कुनै काम ग¥यो जुन ठोस रुपमा अहिले बताउन सकियोस ?
धेरै काम गरेको छ नी । म अघिका अग्रजहरुको नेतृत्वमा पनि रोटरी क्लब अफ दमकले धेरै सामाजिक गधिबिधि गरेको छ । करिब आधा दर्जन भन्दा धेरै बिद्यालयहरुमा खाने पानीको ट्यांकी सहित धारा जडान गरेर स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जावखेल रोटरीको सहकार्यमा दमक साविक १९ हाल १० नम्बर वडामा रहेको सिंहदेवी माध्यमिक बिद्यालयमा २५ लाख रुपैयाँको कम्प्युटर उपलब्ध गराईएको छ । त्यसैगरी बिभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिबिर, जनचेतना मुलक कार्यक्रम, बृक्षारोपण लगायतका धेरै कामहरु भएका छन् ।
दमक क्षेत्रको बिकाशको लागी मुख्य समस्याको रुपमा के रहेको छ जस्तो लाग्छ ?
यहाँको मुख्य समस्या भनेको सहि नेतृत्व नपाउनु देखिएको छ । धेरै संघ संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् तर सबैका आ–आफ्नै योजना अनुसार अघि बढिरहेका छन् । कुनै ठाउँमा कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने कुनै ठाउँमा कार्यक्रम पुग्नै सकेका छैनन् । त्यसैगरी सबैले छरिएर टुक्रा टुक्रा कार्यक्रम गर्दा भनेजती प्रभाबकारी पनि हुन सकेको छैन । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम गर्ने हो भने ठोस काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सहि नेतृत्व हुने हो र सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो भने ठुलै काम गर्न सकिन्छ । त्यसपछ यहाँको समस्या भनेको नागरिक सचेतना कम छ । उदाहरणकै लागी हेरौं न दमकको सरसफाई गर्ने भनेर बिभिन्न समयमा बोरा र झोला बोकेर बजारको फोहर टिप्दै हिँड्छौं हामि तर कति सफा भयो त ? त्यसैले जब सम्म नागरिक सचेन हुँदैनन् तब सम्म सभ्य सहर हुन कठिनाईनै हुन्छ । एउटाले फोहर टिप्दै हिँड्छ अर्को पछि पछि फोहर पार्दै हिँड्छ । नागरिक सचेतना अर्को समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
यसको लागी रोटरीले के गर्छ छ ?
हो यसैकोलागी मैले नगरपालीका संग पनि आग्रह गरिसकेको छु । तपाईहरु अभिभाकत्व लिनुहोस हामि सबै संघ संस्थाहरु संघ स्वयंसेवक माग्नुहोस नागरिक सचेतनाको कार्यक्रम गरौं भनेर नगरपालीकामा प्रस्ताव राखेको छु । यदि हामि सबै संघ संस्थाले १ महिना सम्म १ सय जना स्वयंसेवक खटाउने हो भने नगारिक सचेतना बढ्छ । दमकका चौक चौकमा रहेका हाम्रा स्वयंसेवकले कसैले फोहर फ्यांक्न लागेका उनिहरुलाई सचेत गराउँछन् । फोहर डष्टिविनमा फ्यांक्ने हो भनेर सिकाउँछन् । कसैले सार्वजनिक स्थलमा चुरोट खान खोज्यो भने यहाँ खान हुँदैन भनेर सिकाउँछन् । कसैले मधु गुटखाको खोल सार्वजनिक स्थलमा फयांक्न खोज्यो भने यहाँ नफ्यांक्नुहोस भनेर सिकाउँछन् यसरी सामुहीक रुपमा काम गर्ने हो भने १ महिनामै परिणाम निश्कछ । यसको लागी हामिले काम गर्नु पर्छ ।
Previous: मेलान झापाको जिल्ला समिति पूर्नगठित
Next: गौरादहमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु